नेपाली भाषा बोल्ने चिनियाँ युवा : जो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई चीनको भन्दा बढी विश्वास गर्छन्, तर किन ? (भिडियो सहित) | raynewsdaily.com
नेपाली भाषा बोल्ने चिनियाँ युवा : जो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई चीनको भन्दा बढी विश्वास गर्छन्, तर किन ? (भिडियो सहित)
Sunday, November 21st, 2021, 6:14 pm
काठमाडौं,कान्ति न्यौपाने । पछिल्लो समय नेपालको उपचार पद्धतिमाथि नेपालका नेता, विद्धान र कुलीन वर्गले विश्वास नगरिरहँदा २८ वर्षीय चिनियाँ युवा जोनसोनले भने खुलेरै यसको प्रशंसा गर्नुभएको छ । करिब ८ वर्षदेखि जोनसोन नेपालमा हुनुहुन्छ । यहाँ बसेर ललितपुरको झम्सीखेलमा चाईनिज होटल सञ्चालन गरिरहनु भएका उहाँलाई केही समयअघि मेरुदण्डमा ट्युमर पलायो ।
चीनका नागरिक जोनसोनले सबैले सोचे झै चीनमा गएर मेरुदण्डको अपरेशन गराउनु भएन । उहाँले केही समयअगाडि मात्रै नेपालै अपरेशन गरेर मेरुदण्डको ट्युमर निकाल्नुभएको थियो ।
आफ्नो ट्युमरको सफल उपचार गराउनुभएका जोनसोन चीनको भन्दापनि नेपालको स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्ट लागेको र डाक्टरहरुप्रतिको विश्वास झन् बढेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा यत्ति राम्रो प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा हुँदाहुँदै उपचारका लागि नेपालीहरु किन बाहिर गएका होलान् भनेर उहाँ आश्चर्यमा परेको बताउनुहुन्छ । साथै, चीन र चिनियाँ नागरिकहरुप्रति नेपाल र नेपालीले दिएको सद्भाव र सम्मानबाट आफू निकै प्रभावित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
जोनसोनले मेरुदण्डको अपरेशन जस्तो जटिल शल्यक्रिया सफलताका साथ गर्नुभएका अन्नपूर्ण न्युरोका वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. वसन्त पन्तलाई सम्मानित समेत गर्नुभएको छ । वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. वसन्त पन्तले नै उहाँको मेरुदण्डको ट्युमरको उपचार गर्नुभएको थियो । सम्मानित भएपछि डा. पन्तले आफूलाई एकदमै खुसी लागेको बताउनुभयो । विदेशी नागरिकले आफूहरुको सेवालाई लिएर यत्ति धेरै प्रशंसा र सम्मान गर्नु नेपालको लागि पनि गौरवको विषय भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपाल र चीनबीचको निकै प्रगाड सम्बन्ध रहेको छ । आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दुई देशबीच सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । साथै उहाँ नेपालीले नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति विश्वास गर्न नसक्नु दुखद भएको बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली विश्वसनीय र भरपर्दो नभएको आवाज उठिरहँदा चिनियाँ युवाको विश्वासले भने प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । अनेक नाम गरेर विदेशमा उपचार गराउन जाने ठूला व्यक्तिहरुलाई भने नेपाली स्वास्थ्य सेवाप्रति जोनसोनले देखाउनु भएको विश्वास, भरोसा र सदभावले नेपालको उपचार पद्धति पनि विदेशको भन्दा कम छैन भने सन्देश प्रदान गरेको छ ।